Qeybaha Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Dhaqaalaha Dhaqaalaha wuxuu soo ifbaxay 2006 isagoo hadafkiisu yahay daabacaan macluumaad run iyo tayo leh oo ah qayb muhiim u ah nolol maalmeedka dadka sida dhaqaalaha.
Qeybtan waxaa ku jira dano badan oo iska soo horjeeda taasna waxay ka dhigan tahay in wax kasta oo lagu daabaco warbaahinta soo jireenka ahi aysan 100% run aheyn, maadaama warka inta badan uu leeyahay ujeedo mugdi ah. Sababtaas awgeed Dhaqaalaha Dhaqaalaha waxaan leenahay koox tifaftirayaal khabiir ah oo arinta ku jira in la isku dayo in aan wax yar ka iftiimiyo dadkaas doonaya in ay gunta u soo baxaan oo ay u fekeraan si madaxbanaan.
Haddii aad xiiseyneyso degelkeenna oo aad rabto inaad sahamiso dhammaan mawduucyada aan ka hadlayno, qaybtaan waxaan ku soo bandhigeynaa iyaga oo abaabulan si ay kuugu habboon tahay inaad hesho waxa aad raadineyso.
Liiska mawduucyada shabakadda
meesha lagu nool yahay